Antoko Malagasy miara-miainga : «Mihevitra ny vahoaka ho tsy ampy fisainana ny mpitondra» | NewsMada
Antoko Malagasy miara-miainga : «Mihevitra ny vahoaka ho tsy ampy fisainana ny mpitondra»
Tsy afaka ny hangina. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny birao politikan’ny Antoko Malagasy miara-miainga, rehefa nandinika sy namakafaka ny toe-draharaha politika sy ny fiainam-pirenena ary koa nahita ny fotoam-bitan’ny filoham-pirenena farany teo.
Nahitsy ny fanambarana nilaza fa mbola mitohy ihany ny fiheverana ny Malagasy ho toy ny zaza bodo sy tsy ampy fisainana ka tsy mahalala fa tsy hisy adihevitra demokratika azo heverina mihitsy eto amin’ny firenena raha toa ka mbola tsy tafapetraka amin’ny toerany ny mpanohitra eo anivon’ny Antenimiera roa tonta, inian’ny filoham-pirenena tsy tanterahina. “Tsy ahatongavana amin’ny fahatoniana hiatrehana ny fifidianana azo antoka ny avonavona sy ny fanambaniana ary fanabadoana ny vahoaka toy izao ataon’ireo mpitondra ambony eto amin’ny tany sy ny fanjakana izao”, hoy ihany ny eo anivon’ity antoko naorin’Andrianainarivelo Hajo ity. Miombon-kevitra tanteraka amin’ireo antoko politika maro sy ireo fiarahamonim-pirenena ao anivon’ny Komitin’ny andrimaso demokratika ho an’ny fifidianana (CVDE) ny Malagasy miara-miainga.
Tsy mifanaraka amin’ny efa voahevitra…
Nandray anjara tamin’ireo fikaonan-doha am-bolana maro nataon’ny Vaomieran’ny fakan-kevitra sy mpamolavola ho amin’ny dingan’ny fifidianana koa izy ireo, niaraka amin’ny Ceni ary notronon’ireo manampahaizana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. “Mahatsapa anefa izahay fa ho very an-javona ny ezaka nikaonan-doha sy nifanarahana teo anivon’io vaomiera mpamolavola io, ka endrika sarisary zary tenany fotsiny ny fampivoriana”, hoy izy ireo. Notsindrin’ity antoko ity fa nangatahana andro ny fananganana ny komity iraisan’ireo minisitera kanefa efa antomotra ny fotoam-pifidianana voalazan’ny lalàm-panorenana. Ireo fanamarihana sy fanitsiana nentin’ny fitondram-panjakana raha namory ireo antoko politika maro sy ireo fiarahamonim-pirenena izy ireo, niteraka tsy fifankahazoan-kevitra tamin’ny roa tonta. “Manohitra tanteraka ny tetika hamoahana tolo-dalàna tsy mifanaraka amin’ny efa voahevitra niaraka amin’ireo komity mpamolavola”, hoy ny Malagasy miara-miainga.